Elastic Infra Service | MyanNet
About MyanNet Team
Elastic Infra Service
Customer များရဲ့ Web Applications တွေ စွမ်းဆောင်ရည် အမြဲကောင်းနေဖို့နဲ့ မလိုအပ်ဘဲ ကုန်ကျစရိတ် မများစေဖို့က MyanNet ရဲ့ ပထမရည်မှန်းချက် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအတွက် MyanNet ရဲ့ Customer တွေအတွက် အထူးစီစဉ် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုကတော့ Elastic Infra ဖြစ်ပါတယ်။
Cloud Infrastructure တစ်ခုမှာ ပါဝင်တဲ့ Virtual Server တွေနဲ့ အခြား အစိတ်အပိုင်းတွေ ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေက အမြဲတမ်းရာနှုန်းပြည့် ရှိနေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
Elastic Infra ဆိုတာ လူသုံးအရမ်းများတဲ့ အချိန်တွေမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အဝ ရှိနေစေပြီး၊ လူသုံးနဲတဲ့ အချိန်တွေမှာ မလိုအပ်တဲ့ အချို့အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရပ်တန့်ထားခြင်းအားဖြင့် Infrastructure တစ်ခုလုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မကျစေဘဲ၊ ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာအောင်၊ မလိုအပ်ဘဲ အကုန်အကျ မများအောင် စနစ်တကျ တွက်ချက်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
MyanNet ရဲ့ customer တွေအနေနဲ့ ကုန်ကျစားရိတ် အသက်သာဆုံးနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်မားဆုံး Cloud Infrastructure တွေကို အမြဲတမ်းရရှိအသုံးပြုနိုင်စေဖို့အတွက်၊ Customer တစ်ဦးခြင်းစီရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို စနစ်တကျ လေ့လာ စောင့်ကြည့်ပြီး၊ တစ်ဦးချင်းရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် Elastic Infra Design လုပ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
MyanNet ရဲ့ Elastic Infra ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုတဲ့ အတွက် Customer များအနေနဲ့ 2016 ကနေ ယခု 2018 အတွင်းမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ထောင်ပေါင်းများစွာ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
MyanNet ရဲ့ Elastic Infra ကို အသုံးပြုထားတဲ့ Web Applications, E-Commerce နဲ့ Online Portal အချို့ကတော့
- Pyone Play online media platform (http://pyoneplay.com)
- Rgo47 Mobile Apps (https://www.rgo47.com)
- BEST Denki Electronic Store Singapore (https://www.bestdenki.com.sg)
- iMyanmarHouse Real Estate Portal (https://www.imyanmarhouse.com)
- Myanmar Exam Results (http://myanmarexam.org)
သင့်ရဲ့ Web Application, E-Commerce platform ရဲ့ လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်က တစ်လထက်တစ်လ များလာပြီး၊
Return on Investment (ROI) က မှန်းထားသလောက် တက်မလာဘူးဆိုရင်တော့
သင်ဟာ MyanNet ရဲ့ Elastic Infra service ကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ...... :)
One of the first priority of MyanNet for our customers is - To make sure Performance of the Web Applications of our customers is always the best and to save Unnecessary Infrastructure Costs.
That is why, we are providingaspecial service called "Elastic Infa" to our customers.
InaCloud Infrastructure, the capacity of Virtual Servers and other components are not necessarily needed to be running 100% all the time.
With Elastic Infra, MyanNet analyse all the requirements of the customers' web applications and then designed to make sure all the resources in the Cloud Infrastructures will be fully used in peak hours and stopped some of the the services in non-peak hours.
Since different customers have different nature of web applications - we analyse, design, build, monitor and modify the requirements of infrastructure of each customer to provide Elastic Infra.
Starting from 2016, with the help of Elastic Infra service our customers save thousands of dollars for their infrastructure without affecting the performance of their applications.
Some of the Web Applications, E-Commerce and Online Portals using Elastic Infra service of MyanNet are
If the monthly cost of your Web Application, E-Commerce platform is increasing every month and the ROI is not as good as your cost, it is the time to use Elastic Infra service of MyanNet.... :)
Copyright © 2021, MyanNet.